Cristiano Ronaldo oo gaaray Rikoodh uusan qofi gaarin… (CR7 wuxuu noqday shaqsigii ugu horreeyay ee …) – Gool FM
(Turin) 29 Jan 2020. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa gaaray Rikoodh uusan qofi gaarin, kaasoo uu ka sameeyay Instagram-ka.
Kabtanka xulka qaranka Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa noqday shaqsigii ugu horeeyay ee gaara 200 oo milyan oo raacayaal ah ama followers ah ee barta Instagram-ka.
Ronaldo oo u soo dhaqaaqay magaalada Turin ee wadanka Talyaaniga xagaagii 2018, isagoo ka yimid magaalada Madrid ee caasimada Spain ayaa hadda 27 milyan oo followers ka sara maray gabadha kaalinta labaad ku jirta Ariana Grande, taasoo ah heesaa Mareykan ah iyo jilaa.
Cristiano ayaa noqday ciyaaryahanka ugu followers-ka badan barta Instagram-ka bishii October 2018 kaddib markii uu dhaafay gabadha heesaaga Mareykan iyo jilaaga ah ee Selena Gomez 167 milyan oo followers ah.
Dhinaca kale kabtanka kooxda kubadda cagta Barcelona ee Lionel Messi ayaa ka soo muuqday kaalinta 7-aad shaqsiyaadka taageerayaasha ugu badan ku leh Instagram-ka.
34 jirkan ayaa 10 gool u dhaliyay xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta ee Juventus.
Haddaba halkaan hoose ka eeg 10-ka shaqsi ee taageerayaasha ugu badan ku leh barta Instagram-ka:
Neymar – 132 millio
Justin Bieber – 126 million.